အတ္တသားကောင်း | မျိုးရခိုင်
AFP Category: NewsRegionalRohingya Muslims offer Eid al-Fitr prayers atacamp mosque in Kutupalong refugee camp in Cox's Bazar, Bangladesh on June 16, 2018. Photo: AFP As Muslims around the world celebrated Eid with feasting and gift-giving, Rohingya refugees in squalid Bangladesh camps marked the festival Saturday withapeaceful demonstration demandi […]
Mizzima Category: NewsDomesticUnion Minister Dr. Win Myat Aye, centre-right, acceptsacash donation for families residing at temporary relief camps due to flash floods occurring in their homes in Mottama of Mon State. Photo: MNA Union Minister for Social Welfare, Relief and Resettlement Dr Win Myat Aye yesterday visited Mawlamyine and Mottama of Mon State t […]
Mizzima Category: BusinessDomesticMinister of Commerce Than Myint. Photo: Minister of Commerce/Facebook Myanmar reformed its Investment Commission with 13 members and the Minister at the Office of the Government U Thaung Tun was appointed as chairman, Xinhua has reported. Minister of Commerce Than Myint was assigned as vice chairman of the commission, while […]
တည်မြဲမှုမဟိရေလောကကြီးမှာ လူတိရေ အတ္တအကြီးဆုံး သတ္တ၀ါ ဖြစ်တေ။ အသိဥာဏ် ကြီးသလောက် ကိုယ်ချင်းစာတရားနည်းကတ်တေ။ ကိုယ်ရို့ ကို ကိုယ်ရို့ လူဆိုပြီးသမုတ် ကာအခြားသတ္တ၀ါများကို တိရစ္ဆာန်ဟု သမုတ်ကာ မွီးစပ်စားသောက်နီကတ်တေ။ကိုယ်ရို့နာလားဖို့ ကိုယ်ဘက်ကိုနစ်နာဖို့ ဆိုကေ တခုကိုလည်း တဖဲ့ချေကအစ သိတတ်ကတ်တေ။ အခြားသတ္တ၀ါများကိုဆိုလျှင် သတ်ချင်ရေပိုင်သတ်လို့ ချင်ရေပိုင်ပြုမူနီကတ်စွာပါ။ ယင်း ကြောင်းလူတိရေ အတ္တကောင်တိဖြစ်ပါရေ။